बागलुङ र पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुलले राख्ला त विश्व रेकर्ड ? – Highlights Tourism
गलकोट । बागलुङ र पर्वत जोड्ने गरी निर्माण गरिएको ५६७ मिटर लामो झोलुङ्गे पुललाई विश्व रेकर्ड (गिनिज बुक) मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
विश्वकै लामो भनेर दावी गरिँदै आएको बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोडने गरी कालिगण्डकी नदीमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको खुला प्रकृतिको झुलुङगे पुल । पुल ५६७ मिटर लामो र १३८ मिटर उचाइको रहेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले उक्त पुललाई गिनिज बुकमा लेखाउन निवेदन दिइसकेको छ । तस्वीर: खेमराज गौतम/रासस ।
पौडेलका अनुसार निवेदनपश्चात विश्व रेकर्डको कार्यालयले छानविन गर्नेछ । “हाम्रो पुल विश्वकै लामो ठहर भएमा विश्व रेकर्ड अर्थात गिनिज बुकमा दर्ता हुनेछ”, उgले भने । झण्डै रु १२ करोड लागतमा बनेको उक्त पुल १३८ मिटर अग्लो रहेको छ । पुल निर्माण शुरु भएको दुई वर्षमा सकिएको थियो ।
Previous article दुराडाँडाः इतिहास, संस्कृति र प्रकृतिको सङ्गम
Next article ‘सिस्ने राउण्ड’ ट्रेक गर्ने की?
बागलुङमा प्रदेश सरकारका ६० पर्यटन विकास योजना